Articles tagged 'tendai chatara'
Chatara nominated for ICC Award 10 March 2014 HARARE - Zimbabwe pace bowler Tendai Chatara has been nominated for the 2013 International Cricket Council (ICC) Awards in the Best Test Bowling category. Chatara took 6-55 in Zimbabwe’s historic 24-run win over Pakistan in Harare in September to square the series one all. The 23-year-old M...
The joy of a mentor 17 September 2013 HARARE – Winning a Test match for your country is a personal milestone, but one man who can be forgiven for basking in the glory of Tendai Chatara's star performance for Zimbabwe in the series-levelling win over Pakistan is George Tandi. As a teenager in the early 90s, Tandi was earmarked to b...
Chatara wins it for Zim 15 September 2013 HARARE - Tendai Chatara took a maiden five-for and guided Zimbabwe to a historic 24-run win over Pakistan on the last day of the second Test match to level the series one-all at Harare Sports Club on Saturday. The win ended Zimbabwe's 12-year Test match winless streak against top playing sides...